VALANARETINA PESTA : Nampiato ny fampianarana rehetra ny Oniversiten’ i Toamasina
Tsy afa-bela amin’ny valanaretina pesta ny fampianarana ambaratonga ambony. Ho an’i Toamasina manokana, dia nanapa-kevitra ny Oniversiten’i Toamasina fa atsahatra aloha ireo asa rehetra mikasika ny fampianarana. 12 octobre 2017
Nanomboka ny 9 oktobra lasa teo izany ary tsy mifarana raha tsy ny zoma 13 oktobra. Mahakasika ny fitakiana nataon’ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka sampana Seces Toamasina, fantatra araka ny angom-baovao fa efa tonga ao Toamasina ny vola saingy tsy mbola mandeha ny fizaràna azy.
Mametraka ny ahiahiany noho izany ireo mpampianatra mpikaroka sendra anay.